We She Me: Software Development ဝေါဟာရများ - Virtualization
သဉ္ဇာ - Thinzar - 7/3/08, 11:47 AM
Virtualization ဆိုရင် VMWare နဲ့ VPN လောက်ဘဲ သိခဲ့တာ။ အခုမှ ဒီလောက် အများကြီး ရှိတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ Google Docs က Hosted Application Virtualization တစ်မျိုးကိုး။ Service / Application Infrastructure Virtualization ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာဘဲ။ တကယ်ကို ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေး တစ်ပုဒ်ပါဘဲ။ :)
Andy Myint - 7/6/08, 10:53 PM
IT Post ကို စိတ်ဝင်စားမယ့်သူ့ ရှိပါ့မလား ထင်နေတာ.. အားပေးတဲ့ သူရှိလို့ တော်သေးတယ်။ ကျေးဇူပါ ညီမသဉ္ဇာ။
သဉ္ဇာ - Thinzar - 7/8/08, 6:53 PM
comment ထပ်ရေးဦးမယ်။ ကိုAndy ရေးတဲ့ IT ပို့စ်တွေက အရမ်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။ အရင်တစ်ခါ SQL post ကိုလည်း အရမ်းကြိုက်တယ်။ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ရှင်းပြလေ့ရှိတာကြောင့် ဖတ်ပြီးရင် မှတ်မိနေတယ်။
Anonymous - 8/8/08, 11:20 PM
Hello! I wanna read more about IT. Thanks.
Andy Myint - 8/10/08, 6:12 PM
အားပေးတဲ့သူ များရင် ရေးမယ်လေ... အဲ..နောက်တာ။ အချိန်ရရင် ရသလို အာရုံရရင် ရသလို ရေးသွားပါမယ် စာဖတ်သူ။
စံပယ်ပန်း - 6/28/11, 1:27 PM
အိုင်တီပို့စ်များများတင်ပေးပါဦးခင်ဗျား..။ အစ်ကို့ရဲ့ ဒီအိုင်တီပို့စ်တွေကို myanmarengineer.org မှာပြန်တင်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..။ Credit ကို အစ်ကိုဆိုဒ်လိပ်စာထည့်ပေးပါမယ်..။ တင်လို့ရမရ အစ်ကိုအကြောင်းပြန်ပေးပါခင်ဗျာ..။ အစ်ကိုခွင့်ပြုတယ်ဆိုမှ တင်မှာပါ..။
Andy Myint - 6/28/11, 2:07 PM
Yes, I'd be glad to. Please feel free to use it.
Anonymous - 5/22/14, 3:53 PM
Stringlive - 4/6/15, 10:22 PM
Asp.Net Programming Wiki Facebook Page မှာ ဒီပို့စ်လေးကို Credit ပေးပြီး ပြန်လည်ဝေမျှ ထားပါတယ်။